စံပယ်ချို: အလုပ်မလုပ်ရ သေးတဲ့ နှလုံးသား (ဟာသ)
“အလုပ်မလုပ်ရ သေးတဲ့ နှလုံးသား ” ဆရာဝန် တစ်ဦးသည် နှလုံး အသစ် လဲလှယ်တပ်ဆင်မှ အသက်ရှင်နိုင်တော့မည့် လူမမာ သူဌေးကြီး တစ်ဦးကို ရှင်းပြရာ လူမမာသူဌေးကြီးမှ နှလုံး အသစ်ရှာပေးရန် ဆရာဝန်ကို ပန်ကြား တာဝန်ပေးလေသည်။ ငွေကြေး ကိစ္စ မပူရန်လည်း မှာကြား လိုက်သည်။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် အကြာတွင် လူမမာထံသို့ ဆရာဝန် ရောက်လာသည်။ ဆရာဝန်။ ။ သူဌေးမင်းရေ ၊ နှလုံး အသစ် ၃ စုံတော့ တွေ့ ထားပြီ။ လူမမာ။ ။ ၀မ်းသာလိုက်တာ ဒေါက်တာရယ်။ အကျိုး အကြောင်း ကြားပါရစေ။
စတုတ္ထပုဂ္ဂိုလ်။ ။ ကျွန်တော်က NGO အနေနဲ့  အကျိုးပြု အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ခဲ့သမျှအားလုံး ခုထိ လက်စ မသတ် နိုင်သေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လက်စမသတ် နိုင်သေး တာလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ပရောဂျက် တစ်ခုမပြီးခင် နောက်-ပရောဂျက် တစ်ခု ထပ်လုပ်ခွင့် ရအောင် ကြိုးစားထားလို့ပါ။ ပရောဂျက်တွေ များများ လုပ်ရတော့မှ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ စိန့် ပီတာလည်း သိသားပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ---။ စိန့် ပီတာ။ ။တော်--ရပြီ။ ဟို သုံးယောက် အထဲကိုဝင်။ ခင်ဗျားက ငရဲ ပြည်ကိုသွား။ ဒီမှာ ခင်ဗျားကို လက်ခံထားရင် ခင်ဗျားရဲ့ မဆုံး နိုင်တဲ့ ပရောဂျက်အဆိုပြုလွှာတွေ ကျုပ်တို့ ဖတ်နေရဦးမယ်။ (The Voice) “လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ပေးတဲ့သူ”
(မောင်ကောင်းထိုက်ဟာသများမှ ) ၁။ ခြေထောက်များရင် မကောင်းဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပန်းချီကားကို ကျွန်တော်အိမ်မှာ ချိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ ၅။ သတင်းစကား
ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့။ ရယ်သောသူသည်အသက်ရှည်ပြီးနုပျို၏ထို့ကြောင့် ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးအားပါးတရ ရယ်ကြပါလို့ jasmine Labels:
ကျေနပ်စွာပြုံးရယ်သွားပါတယ်။ မကျေနပ်တာကတော့ လွင်ပြင်လှိုင်းငယ်ရဲ့ မဒမ်ဖြစ်နေတာကိုပါ။ သူက ကျွန်တော့်ဆီမှာ မှတ်ချက်လေးတွေ လာလာရေးနေတာ ကြာပြီပဲ။ ကျွန်တော်က မဂျပ်စမင်ဆီသာလည်ဖြစ်ပြီး သူ့ဆီဟိုးတုန်းကလားပဲ ရောက်ဖြစ်တာ။ ခုမှပဲ ညီမလေးအိန်ဂျယ်လှိုင်ဆီရောက်မှ ဇာတ်ရည်လည်တော့တယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဘလော့လောကမှာ စုံတွဲတွေပိုများလာတာပေါ့။ မြန်မာစာပေလောကကြီးအတွက် အားကြိုးမာန်တက်ပေါ့ဗျ။ နော့.......။ Happy New Year & Happy Birthday!
ခွက်ထိုးခွက်လန်တော့ရယ်ပါဖူးပါးစပ်အုပ်ပြီးခွီးခွီးတော့အသံထွက်တာပေါ့ကောင်တာက ကန်မလေးက စောင်းစောင်းကြည့်တယ်ဒီတော့ အပို့သတ်ဘရိတ်အုပ်ရယ်နည်းနဲ့ရယ်တယ် ဒါပဲး)မောင်ဘကြိုင်
ဟီးဟီးဟီး... ရီသွားတယ် မမဂျက်စ်ရေ
မမရေ စိတ်မကြည်တာနဲ့အတော်ပဲရယ်သွားပါတယ် ကျေးကျေးမမ :)
ဟိဟိ... ပြုံးသွားတယ် မမရေ..မမလည်း ရွှင်လန်းပြုံးပျော်ပါစေနော်..ချစ်ခင်လျက်Junemoe
ဘာတဲ့..လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်တိုက်ပေးခဲ့တာဘယ်ဒူ...မာမီး)))(ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးနော်...)အဲ့ဒီ့ဟာသလေး.အကြိုက်ဆုံးပါပဲရှင် :Pပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းချစ်ခင်စွာဖြင့်သမံစီး
တကယ်ပါပဲ..မြန်မာပြည်မှာလွတ်လပ်ရေးမရတာဆိုလို့...သီဟတင်စိုးပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်...ခုထိကို တော်လှန်နေဒုန်း....ခွိခွိ
Happy New Year Jas ရေ.. ယောက္ခမတွေ အလည်ရောက်နေကြလို့ ခရီးသွားဘာသွားနဲ့ စာမရေးနိုင် ဘလော့မလည်နိုင် ဖေ့ဘွတ်မတက်နိုင် ဖြစ်သွားတယ်။ အခုမှ အကြွေးတွေ လာဆပ်သွားတယ်နော်။ နှစ်သစ်မှာ ရယ်စရာပို့စ်ကလေးနဲ့ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ရွှင်လန်း ပျော်ရွှင်စေတဲ့စိတ်ကူးလေး ကောင်းလိုက်တာ... :))
လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ပေးခဲ့တဲ့လူ နာမည်တွေ့တော့ အသံထွက်အောင် ရယ်လိုက်မိတယ် ဟိဟိ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမလေးရေဆန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝတဲ့ ၂၀၁၂ ဖြစ်ပါစေနော်
အားရပါးရရယ်သွားတယ် jas ရေtag ပိုစ့်လေးလည်းရေးပေးဦးနော်
ညီမ ရေလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ညီမ စာကိုဖတ်ပြီးတော့ရီသွားတယ်နော်ကျေးဇူးအမရွှေစင်
း( ညကမန့်ထားတာလဲတွေ့တော့ဘူးညကရီရတယ်ခုတော ရှာမတွေ့လို့ငိုတွားတယ်း(မမမောင်ကိုဆူဦး ခုတလောစွတ်ဟောက်နေတာဘဲး( ချစ်တဲ့ ဒိုးကန်
အစ်မ ပြောသလို အားရပါးရ ရယ်သွားပါတယ် အစ်မ...
ရယ်ရတယ်ဗျာ.. ဟာသလေးတွေက မိုက်တယ် ဂျက်စ်ရေ...နောက်လည်း ဒါမျိုးလေးတွေ မကြာမကြာ တင်ပေးနော်.. :)
ဟုတ်ပါ့ အတော်တုံးတဲ့ ၀ံပုလွေတွေဘဲ။း)
ဘ၀အမောတွေကို ဟာသနဲ့ဖြေလေ့ရှိတာမို့ ဟာသစာအုပ်အတော်များများဝယ်ထားဖြစ်သလို မကြာမကြာလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...ဒါပေမယ့် ဒီဟာသတွေကတော့ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ အသစ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင် ထိထိမိမိရှိတာကြောင့် အားပါးတရ ရယ်ဖြစ်ပါရဲ့...
Jas ရေ ငါတော့ နင့်ဆိုဒ်ထဲမ၀င်ခင် ခြေထောက်စင်အောင်သုတ်ခဲ့တယ်နော်.......နောက်တစ်ခါလာရင် ခြေထောက်စင်အောင်သုတ်ရဦးမှာလားဟ.....ကျေးဇူးပါ Jas ရေ ငါ နင့်ကြောင့် အသက် ၁ ရက် ရှည်ပြန်ပြီဟဲ့.....ရီရလို့ပြောပါတယ်.....နောက်တာနော်..
တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေတဲ့ သံယောဇဉ် အရောင်တွေ ဖျော့ဖျော့လာတဲ့ အကြင်နာ မရိုးမရွဖြစ်နေတတ်တဲ့ မျက်နှာထား ပုပ်သိုးဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်ခြင်...
လက်တွေက ရေးတဲ့စာ ဒီစာက လူတစ်ယောက်ဘ၀ပျက် နိုင်သတဲ့ နှလုံးသား တခု အသုံးပြု ချစ်ခဲ့ဖူးတာ ဒီအချစ် ဘ၀ပျက် နိုင်သတဲ့။ ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဆိုပြီး မင်ပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာတရားဟာ ခုတော့လဲ တန်ဖိုး အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေတာ မင်းမသိတာလား.....သိရက်နဲ့ အိပ်ချင်ယောင်ဆော...
စစ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း ၁၀ နှစ်သား ချာတိတ်က အဖေကို မေးသည်။ "ဖေဖေ စစ်ပွဲတွေ ဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲဟင်" ...
တစ်ခါတစ်ရံ ဘ၀တွင်စိတ်ဆင်းရဲသောကနှင့် တွေ့ကြုံပြီး
ထွက်ပေါက်မရှိသလိုမျိုး ကြုံတတ်သည် အလင်းရောင်မမြင်ရသည့်
တွင်းနက်ကြီးထဲးကြနေသလိုမျိုး ခံစားရသည် ။
ဖော်ရွေစွာ ပန်းပျိုးခဲ့ပေမဲ့ ညှိုးကျတဲ့ သူု့ အချစ်ဟာ မသာမယာဖြစ်မှာတော့ စိုးရိမ်စိတ် မပြယ်………… ခုန်မင်စွာ လမ်းခင်းပေးခဲ့ပေမဲ့ ဆင်းရမဲ့ သူ့ အိမ်မက်တွေ မန...
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီး နာမကျန်းဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်ထဲက ပြသနာတွေရယ် ၊ မိသားစုဘ၀ထဲကပြသနာတွေရယ် ၊ မထင်မှတ်တဲ့လွဲချော်မှုတွေအပြင် ကလေးတွေနဲ့အဆင်မပြေတာလေးတွေကြောင်...
sky fall (007)
မြင်းခွာရွက်ဟာ စားစရာလဲဟုတ်၊ ဆေးလဲဟုတ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာတွေသာမကာ တခြားလူမျိုးတွေကပါ မှတ်ယူကြတယ်။Sanskrit သင်္သကရိုက်ဘာသာ နဲ့ Mandooka Parni ခေါ်တယ်။ Botanical ...
*ရှေ့ဆက်မှာလား ? လမ်းခွဲမှာလား ?*
*နင် နဲ့ ငါ့ အချစ်*
ပြောပြမယ်...ချီးပုံပြင်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းမယ်။ မရယ်ကြနဲ့နော်............ တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီဘုရင်ကြီးမှာ တော်တော်လှပတဲ့ သမီး...
Camera 360 v4 for iPhone/iPod/iPad
Camera 360 update လေးတွေ့ လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာ
တော်တော်လေးလန်းတဲ့ effect တစ်ခုပါလာတယ်။အဲ့ကောင်က
ဘာလဲဆိုတော့ ဆမ်ဆောင်းရဲ့ နာမည်ကြီး...
*မန်းမြို့ရွှေပြည်* ။ ။ရောင်နေခြည်ဖြင့်၊ ရွှင်ကြည်ချမ်းမြ ၊မြို့ရိုးလှတည့်၊ရွှန်းပစိမ်းဝေ၊
မန်းတောင်ခြေနှင့် ၊ ရစ်ခွေသာမော ၊ကျုံးတော်ကြောဝယ်၊လွင့်မျောဝိညာ...
------------------------------------------ ဒီတစ်ခါ.. မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ဘုရားပွဲတစ်ခုသွားရင်း ပွဲဈေးလျှောက်ကြည့်ရင်း...
အတင်းပြောတာ အကုသိုလ်အလုပ်(စိတ်အားဖြည့် ဓမ္မနှင်းပွင့်)
၁။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် အရေးကြီးဆုံး လူသိက္ခာ
လူတစ်ယောက်ဟာ ပင်ကိုယ်ရုပ်အဆင်း ဘယ်လောက်ချောချော
ကလေးငယ်နဲ့ လက်ကလေးတစ်ဖက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
နားထဲအူနေတဲ့ အသံတွေကို နားမထောင်ချင်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာ နင့်နေတဲ့အရာတွေကို ဖွင့်ထုတ်ပစ်ချင်တယ်။ ညောင်းကိုက်နေတဲ့ မျက်ရိုးတွေကို အခါခါ ဖိနှိပ်မိတော့လွန်ခဲ့...
wonderful creature; the little bird
အငယ်ဆုံးဖြစ်သော ကျွန်မမှာ ဘာလို့မှန်းမသိ ကောက်ရသော ညီမလေးတွေ အတော်များပါသည်။ အသက်ကြီးလာသည့် သဘောပေါ့။း)
မှတ်ဥာဏ်တွေက သိပ်မကောင်းလှတော့ဘူး ဆိုတော့ ကျွန်မဆီ ...
အိပ်ချင်သော်လည်း အိပ်၍မပျော်သောညသည် ခက်ခဲပင်ပန်းလွန်းလှပေစွ။ အခန်းထဲသို့ အပြင်ဘက်ဆီမှ မဆိုစလောက် ဖြာကျနေသော အလင်းရောင်ကြောင့်သာ စိတ်ပင်ပန်းမှုများသည် အ...
ကြောက်မက်ဖွယ်အော်သံတစ်ခုရဲ့ စူးစူးဝါးဝါးအော်သံကြားမှာ နောက်အော်သံတစ်ခုကျကွဲသွားတယ် အော်သံဟာ ပင်လယ်ကလာတယ် အော်သံဟာ ပုလင်းထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဖန်ခွက်တစ်လုံးထဲက လာတယ် အော်သံဟာ ဘောလ်ပင်န်တစ်ချောင်းထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ကော်ရက်ရှင်ပန်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ စာရွက်ဖြူတစ်ရွက်ထဲက လာတယ် အော်သံဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက လာတယ် အော်သံဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ စားပွဲတင်ပန်းအိုးထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ပြက္ခဒိန်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ သကြားလုံးအခွံထဲကလာတယ် အော်သံဟာ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကလာတယ် အော်သံဟာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ပန်းခြံထဲကလာတယ် အော်သံဟာ အခန်းတစ်ခန်းထဲကလာတယ် အော်သံဟာ အပျော်အိမ် တစ်အိမ်ကလာတယ် အော်သံဟာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေထဲကလာတယ် အော်သံဟာ recycle ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ လူ့ထုဆီကလာတယ် အော်သံဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီကလာတယ် အော်သံဟာ စားပွဲခုံထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဘီယာဘူးခွံထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဖန်ခွက်ခြင်းထိတိုက်သံတွေကြားက လာတယ် အော်သံဟာ နိုက်ကလပ်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ အကျီင်္ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဘောင်းဘီထဲက လာတယ်အော်သံဟာ စကဒ်ကြားထဲကလာတယ် အော်သံဟာ အတွင်းခံတွေထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သံတွေကြားကလာတယ် အော်သံဟာ စလင်းဘတ်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ငွေစက္ကူတွေဆီက လာတယ် အော်သံဟာသွေးတွေချွေးတွေဆီကနေလာတယ် အော်သံဟာ တယ်လီဗေးရှင်းထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဖုန်းထဲက လာတယ် အော်သံဟာ ကွန်ပြူတာစခရင်ပေါ်ကလာတယ် အော်သံဟာ မောက်စ်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ကီးဘုတ်ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ယူပီအက်စ်ကလာတယ် အော်သံဟာ နည်းပညာထဲကလာတယ် အော်သံဟာ စက်ရုပ်တွေဆီကနေလာတယ် အော်သံဟာ ယဉ်ကျေးမှုထဲကလာတယ် အော်သံဟာ အမွေအနှစ်တွေ ထဲကလာတယ် အော်သံဟာ သစ်ပင်တွေကလာတယ် အော်သံဟာ မြစ်ချောင်းတွေကလာတယ် အော်သံဟာ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကလာတယ် အော်သံဟာ လယ်ယာမြေတွေကလာတယ် အော်သံဟာ လေထုထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ရေထုထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲကလာတယ် အော်သံဟာ နာကျည်းမုန်းတီးမှုထဲ ကလာတယ် အော်သံဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရားထဲကလာတယ် အော်သံဟာ နာကျင်မှုထဲကလာတယ် အော်သံဟာနာဖျားမှုထဲကလာတယ် အော်သံဟာ သနားကြင်နာခြင်းထဲကလာတယ် အော်သံဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားထဲကလာတယ် အော်သံဟာ သစ္စာတရားကလာတယ် အော်သံဟာ အတွေးတွေထဲကလာတယ် အော်သံဟာ နားကလာတယ် အော်သံဟာ ပါးစပ်ကလာတယ် အော်သံဟာ မျက်လုံးကလာတယ် အော်သံဟာ အော်သံကလာတယ် အော်သံဟာ ဒီကဗျာထဲကလာတယ် အော်သံ
ဘာသာစကားဟာ အရောင်တွေ လိုင်းတွေ အသံတွေထက် ပိုရှုပ်ထွေးတယ်
ဒါပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဘာသာစကားထက် ပိုခက်ခဲတယ်
ဘယ်ဘာသာစကား ဘယ်အရောင် ဘယ်အသံ ဘယ်လိုင်းမှ သူ့ကိုလက...
ဓနဉ္စယာသူဌေးကြီး၏ သြဝါဒ စကားကြီးဆယ်ခွန်း(ဂန္ဓဝင်မြောက် စကားကြီးများ)
(က)အတွင်းမီးကို အပြင်သို့ မထုတ်ရ=အိမ်တွင်းကိစ္စ လူမှုရေးပြဿနာကို တစိမ်းတရံများကို မပြောရ။
(ခ) ပြင်ပမိးကို အိမ်နါင်းသို့ မသွင်းရ =မိမိတို့ မိသားစုကို ပြစ်တင်ေ...
Number of View: 277 စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာနှင်ကျွန်မ ဆုံဆည်းမှုက စာပေကိစ္စရပ်များမှ စတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဆရာ့၏အမေရိကန်စကားပြောသင်တန်းတွ...
*~ Ko Ki ~* ဒီနေ့မနက် ကားပြောင်းစီးဖို့ ကမ္ဘာအေးမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီး မြို့ထဲဖက်သွားမယ့် *
43*-လိုင်းကားကိုရပ်စောင့်နေတုန်း ဘုန်းကြီးအိုတစ်ပါး တောင်ဝှေးလေး ...
ကျစ် ကျစ်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးလေးကပဲ
ဖြူတယ် မည်းတယ် အသံကောင်းမဟစ်ချင်ဘူး
ကျမရဲ့ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသားချစ်သူ
ဟယ်... ဒီနေ့ဟာ Father's Day ပဲ...
ဒီနေ့ မနက် (၅)နာရီကျော်ကြီး အိပ်ရာက နိုးလာပြီး ပြန်အိပ်မရတဲ့အဆုံး ဟိုတွေး၊ ဒီတွေးလုပ်ရင်းက ဒီနေ့ အဖေများနေ့ဆိုတာ သတိရ...
မောင် ခေါင်းခါဖို့ မပြင်ဘူး ငွေကြယ်တွေ ဖူးဖို့
အဲဒီ ရင်ပြင်က သောက
မောင်ဖွဖွလေး သိမ်းထားမယ် ။
*ဘယ်အရာကိုမှ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားခွင့်မရတဲ့လောကကြီးမှာ*
*သမီးလေး အမြဲတမ်း ကိုင်ထားခွင့်ရချင်တယ်ဖေဖေ...*
* *ရာထူးဆိုတာ.. ဘာလဲ ???
တင်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်.. ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်.. ခဏ၊ ခဏ ပြန်မေးမိတဲ့.. မေးခွန်းတစ်ခုပါ…
တကယ်ပဲ.. ရာထူးဆိုတာ ...
ကမ္ဘာဦးအခါ ငှက်တွေက ရွှေဟင်္သာတွေကို မင်းအဖြစ် တင်မြှောက်ကြပါတယ်တဲ့။ ဟင်္သာမင်းမှာက တစ်ဦးတည်းသော သမီးပျိုလေးရှိပါတယ်။ ရွှေဟင်္သာမင်းက တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးကို အ...
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကို အကြောင်းပြုပြီး ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်း တစ်စု ပြန်ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလံ...
[image: Photo: လမ်း ၃ဝ မှတ်တိုင်တွင် လူအတင်အချ ပြုလုပ်သော ယာဉ်များကို ပြင်းထန်စွာ အရေးယူ တော့မည် Thursday, June 13, 2013 ရန်ကုန်မြို့တွင် မကြာခင်က ဖျက်သိ...
ဒကာ။ ။ အာရုံငါးပါး ကာမဂုဏ်တရား ခံစားတဲ့နေရာမှာ သောတာပန်, သကဒါဂါမ် ခေါ်တဲ့ အရိယာတို့ ခံစားကြတဲ့ စားသောက် မှု ရသာရုံ၊ ပွဲက တီးမှုတ်သီဆိုမှုတို့ကို ကြည့်ရှုခံစား...
တစ်ကယ်တော မင်းတို.အားလုံးဟာ ငါတို.မကြိုဆိုခဲ.တဲ. ဧည်.သည်တွေပါ...
မင်းတို.တွေဟာ ငါတို.မြေမှာ လာခိုလှုံတယ် ပြီးတော့ ငါတိ...
*မြင်လှည့်ပါ သခင် ကြင်ခဲ့တာ ရာဇ၀င်မှာ စာတင်လောက်တဲ့ အချစ်မျိုး .....ဒါကို.... နှင်ရက်စရာ ထင် သူမကြင် ဘယ်လိုပင် တမင်ရှောင်ခွာ စိမ်းပေမဲ့လို့ .....မြတ...
[image: Click here to get more Happy Birthday Greetings from MasterGreetings.com]
အိပ်ရာကထ လေထုထဲမှာ ရှုရှိုက်လိုက်ရတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကို ချောင်းကြည့်ဖို့ လိုင်းပေါ်တက်ပြီး
မဆိုင်တဲ့ ငှက်တွေက အငန်းမရ နားလို့
ရုတ်ရုတ်တော့မလုပ်နဲ့ သစ်ငုတ်တွေတောင်ပြာချနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲ
လူဖြစ် နာသွားမယ် သွားတဖြဲဖြဲ ဝံပုေ...
ရေနစ်သူ …. ဝါးကူထိုး
လမ်းပျောက်သူကိုမှ .. လမ်းဖျက်လိုက်ချင်သတဲ့လား …
” သွေး” ဆိုတာ စကားပြောတယ်တဲ့
ဘာတဲ့ .. ကိုယ့်လူ သူ့ဘက်သား ဆို...
*သောကတွေနဲ့ မျက်ရည်ဝေလိုက် ဒေါသတွေပုံဖေါ်...
ရင်တွင်းစာမျက်နှာ ကြေငြာချက် (၁)
ကဗျာတစ်ပုဒ်အတွက် ခံစားချက်တွေ စုစည်းနေခဲ့တယ်။
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာတွေအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
သံစဉ်တွေ အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီ...
မြန်မာကဗျာဆိုတာ ဂျို(ချို)နဲ့လား (၂၈)
အက္ခရာ အသတ် အလိုက် ချီနည်းချနည်းများ
စာလုံးရေလိုက် ချနည်းတွေအပြင် “အသတ်” အက္ခရာနဲ့ အချပိုဒ် ရေးဖွဲ့ပုံကို ကြည့်ပြီး ခေါ်တဲ့ ချနည်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနည်းတေ...
(၈)ကြိမ်မြောက် AIDS ဖြင့်ကွယ်လွန်သူများအား အောက်မေ့ဘွယ် မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲ
လူမှုကွန်ရက် ပေါင်းစပ်အဖွဲ့(အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) COMMUNITY NETWORKS Consortium on
HIV မှဦးစီးကျင်ပသော (၈)ကြိ...
မင်း.. လမ်းပျောက်ဖူးပါသလား၊ အဲဒီတုန်းက မင်း ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။
သူရဲ့နာမည်က ကြွက်ကလေး မိုရစ်။
တခါမှာ သူ့ကို သူ့သခင်က ရေထဲကို ပြစ်ချခဲ့တယ်။ တနေရာကလွဲရင် ကျန်တဲ...